होल्ड कम्पनीहरु लेखा Martech Zone
मँ तपाई संग मेरो ईतिहासमा केहि भयानक भयानक कथाहरू साझा गर्न सक्छ बैंक र क्रेडिट कार्डको साथ। यो मध्ये केही मेरो गल्ती स्वीकार गरीएको छ तर यो प्राय जसो बैंकहरूको हास्यास्पद कार्यहरू हो। म आश्चर्यचकित गर्दछु कि यी केटाहरू कसरी रातमा सुत्छन् ... ठुलो मुनाफा, बेलआउट्स, कार्यकारी बोनस र हास्यास्पद ओभरेज फीसले उनीहरूको प्रणाली सुधार गर्नको लागि पनि बजेको छैन।
यहाँ एक उत्कृष्ट उदाहरण छ ... मेरो व्यापार क्रेडिट कार्ड यात्राको बखत दुई पटक बन्द गरिएको छ। दुबै यात्राहरू अघि मैले बैंकलाई सूचित गरें कि म यात्रा गर्दैछु र म झण्डा नभएको निश्चित गर्न। कलहरू समयको बर्बादी थियो - मलाई दुई पटक बन्द गरियो शंकास्पद गतिविधि। दुई पटक पर्याप्त थियो ... र पुरातन अनलाइन प्रणाली र सप्ताहन्त र रातहरूमा समर्थनको कमीले अन्ततः मलाई ठूलो बैंकमा फर्कायो। हामी तिनीहरूलाई JP भन्ने छौँ।
JP सँग धेरै राम्रो अनलाइन प्रणाली छ। जेपीसँग विदेशी तार क्षमता छ। JP सँग एक अनुप्रयोग छ जहाँ म यसको फोटो लिनको साथ चेक जम्मा गर्न सक्छु। जेपीसँग मेरो खातासँग पेरोल क्षमताहरू पनि छन्। सायद कूलस कुरा ... जेपीले मलाई एक व्यक्तिगत बैंकर तोक्नुभयो। व्यक्तिगत बैंकर के हो? यो त्यस्तो व्यक्ति हो जुन मैले ईमेल गर्नुपर्दछ र प्रत्येक चोटि मलाई समस्या आउँदा फोन गर्नुपर्दछ। मेरो व्यक्तिगत बैंकर तब मलाई मद्दतको लागि कल गर्न १-1०० नम्बर भन्छ। पहिलो स्थानमा १-800०० नम्बर मात्र कल गर्ने पुरानो प्रणालीमा विशाल सुधार। [हो, यो व्यंग्य हो]
BTW: मेरो व्यक्तिगत बैंकर एक प्यारी हो र मलाई थाहा छ उनी मलाई सकेसम्म मद्दत गर्न कोशिस गर्दैछिन्। यद्यपि यसले समस्या समाधान गर्दैन।
यो साताको अन्तीममा, मैले यसका लागि केही एयरलाइन टिकटहरू अर्डर गर्नु पर्छ सम्मेलनमा संलग्न यस महिनाको अन्तमा सान फ्रान्सिस्कोमा। पहिले मैले कय्याक प्रयोग गरें र क्रेडिट कार्ड असफल भयो। अर्को मैले डेल्टा.कट साइट प्रयोग गर्‍यो र यो असफल भयो। दुबै पटक यसले भने कि मेरो ठेगानाले मेरो खातासँग मेल खाँदैन। मेरो समस्याको साथ मात्र समस्या दुबै साइटहरूमा ठीक उही तरीकाले प्रविष्ट गरिएको छ त्यसैले त्यहाँ एक भिन्नता छैन। ह्या hang्गिंग भन्दा, म होल्डमा उभिएँ जबकि डेल्टा प्रतिनिधिले व्यक्तिगत रूपमा मेरो बैंकलाई ठेगाना प्रमाणित गर्न बोलाए। (डेल्टाको राम्रो राम्रो!)
डेल्टा प्रतिनिधि फिर्ता आए र मलाई भन्यो कि मेरो बैंकले उनीहरूलाई भन्यो कि मेरो ठेगाना मेल खाँदैन। अब म निराश छु। अर्को लाइनमा मेरो हो व्यक्तिगत बैंकर। मेरो व्यक्तिगत बैंकर टेक्निकल समर्थनको साथ सम्पर्कमा हुन्छ र उनीहरूले सिफारिश गर्दछन् कि म मेरो zip4 को साथमा वा मेरो zip कोड बिना मेरो ठेगाना प्रयोग गर्दछ। गम्भीरतापूर्वक।
डेल्टा साइटले Zip4 विस्तारको लागि अनुमति दिँदैन, त्यसकारण मेरो ईमेलहरू र उसको समर्थन टोलीमा मेरो व्यक्तिगत बैंकरको कलहरू बीचको समय गुमायो। मैले मेरो व्यक्तिगत बैंकरलाई थाहा दिएँ कि यो अझै कार्य गरीरहेको छैन। चार दिन पछि र मसँग टिकट छैन।
यस बिन्दुमा तपाईलाई लाग्न सक्छ कि किन मैले मेरो अन्य कार्डहरू मध्ये एकलाई मात्र लिइन र टिकटको लागि भुक्तान गर्दिन। किन? किनभने यो काम गर्न मानिन्छ। यो के हो एक व्यापार क्रेडिट कार्ड को लागी ... को लागी यात्रा को रूप मा काम को लागी, उपकरण खरीद, आदि। I do टिकट किन्नको अन्य तरिकाहरू छन् र म निश्चित छु कि अधिकांश मानिसहरूले प्रणालीलाई विफल पारेर त्यो गरे।
तर म जाँदैछु।
हामी सबै इमान्दारीसाथ हाम्रो जीवनमा धेरै workaround संग राखेका छौं। हामी सफ्टवेयर त्रुटिहरू, बैंक मुद्दाहरू, फोन मुद्दाहरू, इन्टरनेट समस्याहरूको साथ राख्छौं ... हाम्रो जीवन यस सबै चीजहरूको साथ सजिलो हुँदै गइरहेको छैन, यो अझ जटिल हुँदै गइरहेको छ। र जब हामी बढि जटिलता थप्दछौं, हामी थप समस्याहरू भेट्टाउँछौं। यी सबै समस्याहरूको मुटुमा तथ्य यो छ कि हामी workaround को आशा गर्न आएका छौं र अब कम्पनीहरूलाई जवाफदेही हुनेछैन। मेरो व्यक्तिगत बैंकरलाई कल गर्न र ईमेल गर्नु भन्दा अर्को क्रेडिट कार्ड लिनु सजिलो छ।
तर भोली म फोनमा र ईमेलको साथ मेरो केहि बढि उत्पादकत्व गुमाउँदैछु व्यक्तिगत बैंकर। उनको उत्पादकता (दुर्भाग्यवश) पीडित हुने छ, टेक्नोलोजी टोलीको साथ जुन उनीसँग काम गरिरहेकी छिन्। म निश्चित गर्न जाँदै छु कि यो फिक्स भयो - ताकि अरूले म जे गर्दैछु त्यसले पार गर्न पर्दैन।
यदि हामीले सबै कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार ठान्छौं भने हामी सुधार गर्न जारी राख्नेछौं र हामी सबैले यसबाट फाइदा लिने छौं।
टैग: उत्तरदायित्वबैंकिङकम्पनीहरुक्रेडिट कार्डउत्पादकता